Abtirsiimada Qowmiyadda DigilMirifle Q-9aad | WEEJIDOW
« Duqeeyn dad ay ku geeriyoodeen oo Muqdisho lagu garacay xili Baarlamaanka uu kulunsanaa
Abtirsiimada Qowmiyadda DigilMirifle Q-10aad »
This entry was posted on Juunyo 28, 2010 at 9:17 b and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
3 Responses to “Abtirsiimada Qowmiyadda DigilMirifle Q-9aad”
Seteembar 28, 2010 7:00 g | Halcelin
Walaal Isaaq:Waan la socdey qoralladada qiimaha leh oo idil, axad kasta waan dhararayey intey imaneyso, dadaalkaada sii wad guul ban kuu rajeynaya.
Waxaan ahay nin u dhashey QOOMAAL, “Afar Dhukubo abboosho” Afarta Dhukubo waa afar ceel-gaab maax ah oo ku yaal dhulka loo yaqaan “Godowne” oo ay degaan Qoomaal Bari.
Sidii Ceel Walwaleed kuma go’aan wadaamuhu carruurta iyo wayeelkaa ka waraabsha xoolaha. Mana guraan jiilaal iyo rooba. Waa dhul aad u qurux badan oo ku teedsan jiidda Bari ee Gobolka Bakool, gaar ahaan ku dhow Biyooley iyo Tiyeeglow, mamul ahaanna hoos taga.
Wa halkaan aniga ku dhashey kuna soo barbaarey. Aabahey Allah ha unaxriistee wuxuu ahaa malaaqa qoomaal muddo konton sano ka badan, aad buu ugu xeel dheeraa taariikhda Digil iyo Mirifle wax badan baan ka xasuustaa sheekooyinkiisii taariikhiga ahaa. Abahey wuxuu iigu sheegey magaca QOOMAAL inuu ka yimid erey af soomaali ah Qoon ama Qoomid ama Qoomaal oo isku micna ah dhamaantood; Hees waxa jirtey Radio Muqdisho laga qaadi jirey” Qoomaasha dirirtiyo qab qab dhaafey iyo maan” waa waxaad qoonsatid ama ku qooma, ama qoomaal ku greliya.
Waxay ahayeen dad dhib badan oo wax qooma oo dagaala. Waxay bari u xigaan Mirifle oo idil, waxay ood wadag yihiin Gaaljecelka Hiiraan dega.
Waa dhul daaqa xoolaha aad ugu fiican, dhul beereed fiicana leh oo uu si fiican uga baxo badarka iyo digirta, waa dhulkii malabka iyo shinida, waa dhul aan weli saameyn afooyinka ilbaxnimada basharka. waa gabiib aad u caafimaad badan ooy cudurradu ku yaryihiin
Qoomal waxa loogu bixiyey way qoomaal badnaayeen oo qabiil aaney isdiririn ma jiro deegaankaas.
Qoomaal Waa xoogaggii u diidey inuu Gaal-jecel soo dhex maro ama uu ka
barabixiyo Miriflaha dhulkooda. Weligeen dagaal baa naga dhexeen jirey anaga iyo Gaal jecel, wuuna ka baqan jirey inuu na soo waajaho.
Walow uu ka gudbey markii dambe inta u dhaxeysa Buur Hakaba iyo Daafeet ilaa Kafar iyo Kismaayo ayuu gaarey hadba siduu geela afkiisa uun u raacayey iyo halka uu daaq ka helaayo.
Marka saaxiib, ma filaayo qof iiga aqoon badan Qoomaal iyo taarikhdeeda inuu jiro maanta, runtiina sidaas buu ku yimid magacaas.
Markaan ka baxey Kulliyaddii Lafoole ayaan u aadey dhulkaas cilmi baaris mar an qoraayey buuggeyga qalin jebinta, waxaan wax ka qorey waxay ahayd “Geela”. Soomaaliya waxaa iigu dambeysey 1986kii.
Buugaagteyda waxa la ii sheegey iney ku gubteen dagaalkii Caydiid uu ku soo qaadey Baydhabo. Guriyihii xaafadda oo idil bey gubeen, waxayna ahayd markey RRA ay aad u xanuunjisey Habar-gidirta. Aniga markaas Sacuudigaan joogey. Odeyga aabbahey madfac ay soo tuureen baa firir gaarsiiyey Ilaahey baa ka badbaadiyey.
Oktoobar 21, 2010 6:38 b | Halcelin
CABDI YARE EED I EEDA ING MAHADSINGT SAAXIIB RAGANIMADAN AYAA LOO BAAHAN YAHAY
WAXAAN KUGU RAACSANAHA SIDA AAD TIRI OO AH
WAXAA BEENBADAN DAAROODKA IYO HAWIYAHA
Maas yare Says:
Agoosto 6, 2012 5:53 g | Halcelin
Asc waxan u mahad celinayaa qoraaga kow iyo kun jeer aniga waxan u dhashay Digil iyo mirifle gar ahaan mirifle wiliba sedi boqol dembe ayan kaso jeeda. waxan jeclahay inad noo soo gudbiso taariikhdoda Hariin ,Eelaay iyo Heledi iyo wiliba sida beesha begedi oo afar caruur ah ay sedax kamid ah ugu mid noqotay beesha Eelaay hadii ad taariikh ka hayso.
waad ku mahad santahay sida waqtigaaga iyo aqoontada ugu hortay sidii ad ugu fa ideyn lahyd caruurta yar yar ee an abtisimahooda an aqon qurbahana ku dhashay iyo kuwa dalka joga intaba waxana amin sanahay in dad badan yar iyo weynba leh ay ka faideysan doonan mahadsanid markale.
Waxana dhaliil uso jeedinaya dadka an qowmiyada ka dhalan ee isku dayay iney carqaladeeyaan qoraaga iyo wiliba kuwa u dhashay e hadi wax yar qaldaman qofka waa bin adanee, intey sixi lahayn ama hadi ay tarikh dherad ah hayan uso gudbin laha taa badalkeeda aflagaado iyo wax yabo an ficney ku dhaliilayo qoraaga.
hadaba waxan so jedinaya inay ka wan towban midas qoraaga wa qoraa somaliyeed halaga fa ideysto, hana la dhiro galiyo.